Tourism Week – NMDC
By NMDC Editor Uncategorized Comments Off on Tourism Week
NMDC SU နဲ့ Major အသီးသီးက Student Association တွေပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ NMDC VSF 2.0 ဆိုတဲ့ပွဲလေးတစ်ခု လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိနှင့်ပြီးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်
ရှေ့က week တွေမှာလည်း JNL နဲ့ BBM တို့က စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေနဲ့ တင်ဆက်ခဲ့ကြသလို ဒီတစ်ခေါက်ကျရောက်လာတဲ့ Tourism Week မှာလည်း Tourism Student Association (TSA) အနေနဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေရဲ့ Stay Home ကာလတွေမှာ ပိုမိုအကျိုးရှိစေဖို့ ဘယ်လိုမျိုး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး သူမတူတဲ့ Title တွေ၊အတွေးအမြင်တွေ နဲ့ ဆွေးနွေးပေးသွားကြဦးမလဲဆိုတာ စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်
ဒီတော့ ဘယ်လို ဗဟုသုတရစရာ အစီအစဉ်တွေပါဝင်နေသလဲ???
ဘယ်လို ပညာရှင်တွေရော ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်နေမလဲ???
ဘယ် အချိန်တွေမှာ ဒီ program လေးကို လုပ်ဆောင်သွားမလဲ ??
စတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ ဒီနေ့ ည (7:00)pm မှာ ကြေညာပေးသွားမှာမို့ လက်လွတ်မသွားရအောင် အခုပဲ NMDC SU နဲ့ TSA page လေး ကို See first ထားလိုက်ကြတော့နော်
#NMDCVSF2.0 #NMDC #TSA